Ukuhamba eYurophu | Iholide | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Izithombe zezindawo zokuhamba eYurophu
Ezwekazi laseYurophu, abantu abahlukahlukene kakhulu bahlala ndawonye namasiko abo endaweni encane. Ngenkathi amadoda nabesifazane begubha e-lederhosen nase-dirndl eBavaria e-Oktoberfest, abaseSpanish bazoba seesta phakathi nosuku olushisayo lwelanga. Lapho e-Yurophu, izindawo ezihlukahlukene kunazo zonke kanye nokuhlangana kwamasiko amaningi, kukhona ukushaya inhliziyo yabo bonke abathwebuli bezithombe.
EYurophu: Ibhodlela elinamanzi
Abantu abaningi bakhetha ukuchitha amaholidi abo emfudumeni weCaribbean noma emadolobheni amakhulu aseNyakatho Melika. Abanye bathola amasiko amasha e-Asia noma e-Afrika.
Imephu yaseYurophu yokugqoka imibala nokwakha
Kodwa-ke, abahambi abaningi bakhohlwa ukuthi ngisho nezwe elisendlini yethu kunezinhlobonhlobo zokunikela, ngokungafani nezinye izwekazi emhlabeni.
Amaphupho athole umoya okhululekile anikezwa iScandinavia. Ngokuyinhloko, abahambi abafuna ukuthula nokuphumula ukuze baphephe ukuphila kwabo kwansuku zonke ezihle kakhulu enyakatho yeYurophu.
Kungakhathaliseki ukuthi isithombe sezinyoni zasendle noma isithombe se-panaroma sokushona kwelanga, esibonakala kwelinye lamachibi amaningi aseScandinavia, kusetshenziswe ukudubula okuphefumula eSweden, eNorway naseFinland.
Kodwa uma enyakatho isabumnene kakhulu, ngisho nasehlobo, khona-ke ungathola amazwe aseNingizimu Yurophu. I-Spain, i-Italy ne-Portugal ayinelanga nje kuphela nelwandle ukuze linikeze kodwa futhi isiko nomlando othakazelisayo okumele utholakale. Ngaphandle kwamabhishi ezokuvakasha kanye namahhotela amakhulu, abahambi enkabeni yezwe bangakwazi ukwazi izwe elivela ebusweni obusha ngokuphelele, okungafaki iholidi elihlanganisa wonke umuntu. Kanjani-ke indawo yokuhlala encane e-Pyrenees enokuhamba nokuhamba? Kunoma ikuphi, kuzovela amathuba amaningi ezithombe ezinhle kakhulu.
Yiqiniso, amadolobha aseYurophu nawo aningi okuzokwenza. I-Paris neLondon basondelene nathi baseYurophu kanti nokho bambalwa kakhulu abantu sebekubone kakade amadolobha. Ngesikhathi amaMelika noma ase-Asiya kufanele athathe indiza ebiza kakhulu ephakathi kwamanye amazwe, uhambo oluya emadolobheni athiwa ludla amahora ambalwa nje nemali encane.
I-Mallorca - Phakathi kwesiko, indawo yezwe kanye neqembu leqembu
Yiqiniso, izithombe ze-Eiffel Tower yaseParis, i-Big Ben eLondon noma ezinye izinto ezifana ne-Roman Coliseum nazo zihle kakhulu kumaphrofayli wezokuxhumana, i-albhamu yezithombe zakudala noma isikrini sasekhaya.
Ngisho namathuba afakwe ohlwini abonisa kuphela ingxenye encane yalokho engakuthola ngempela eYurophu. Phela, ubani owazi ukuthi ukhona ngempela e-Iceland, eLithuania noma e-Estonia? Indlela engcono kakhulu yokuyithola eholidini elilandelayo futhi ugcine izinkumbulo zakhe ezithombeni.
Iziqhingi zaseMeteora, iGrisi
I-Barcelona, ​​iSagrada Familia
I-Venice, i-Grand Canal
I-Mallorca, i-cathedral yama-cadets
I-Malta, iLa Valetta